कस्तो ब्रजपात: लकाडाउनमा ८ जनाको परिवार भोक भोकै ! बारम्बार झुण्डिने प्रयास, हिड्ने नसक्ने अवस्थमा (भिडियो हेर्नुहोस) सहयोग गर्ने सेयर गराै - Nepali in Australia
कस्तो ब्रजपात: लकाडाउनमा ८ जनाको परिवार भोक भोकै ! बारम्बार झुण्डिने प्रयास, हिड्ने नसक्ने अवस्थमा (भिडियो हेर्नुहोस) सहयोग गर्ने सेयर गराै
May 15, 2021 adminLeaveaComment on कस्तो ब्रजपात: लकाडाउनमा ८ जनाको परिवार भोक भोकै ! बारम्बार झुण्डिने प्रयास, हिड्ने नसक्ने अवस्थमा (भिडियो हेर्नुहोस) सहयोग गर्ने सेयर गराै
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक खेमाले उपेन्द्र यादव पक्षलाई नबोलाई नेता राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलका नेता चयन गरेको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले बिहीबारै भक्तपुरस्थित एक होटलमा महतोलाई दलका नेता छानेको एक नेताले बताए । ती नेताले होटलको उक्त भेलामा १८ सांसद सहभागी भएको जानकारी दिए ।
यादव पक्षले भने महतोलाई नेता चयन गरेको बारेमा अनभिज्ञता जनाएको छ । संसदीय दलको विधान हुने र त्यो विधान केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको यादव पक्षको भनाइ छ ।
जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने पक्षमा थिए । ठाकुर र महतो भने प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा उभिएका हुन् । उनीहरूकै सहयोगका कारण ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर र महतो पक्षले साथ नदिएपछि बिहीबार कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संयुक्त सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन असफल भएका थिए । त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ठाकुर र महतोलाई सरकारमा आउन आह्वान गरेका थिए ।
ओली र नेम्वाङको निर्वाचन क्षेत्रको एउटा सडकः बिरामी बोकेको गाडी रातभर हिलोमा डुब्यो
April 6, 2021 auther